Daawo Sawirrada: sida diirran ee ciyaaryahannada Puntland loogu soo dhaweeyay Garowe – Radio Muqdisho
Daawo Sawirrada: sida diirran ee ciyaaryahannada Puntland loogu soo dhaweeyay Garowe
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo uu weheliyo Madaxweyne ku-xigeenka Eng. Cabdixakiim Cabdullaahi Cumar Camey ayaa Garoonka diyaaradaha ee Konoco ee duleedka magaalada Garoowe ku soo dhoweeyey xulka kubbadda cagta Puntland, kuwaas oo dhowaan ku guuleystey koobkii ciyaaraha ee u dhexeeyey dawladda Puntland iyo dawlad goboleedyada dalka.
Soo dhoweynta ayaa waxaa ka qayb qaatay Wasiirro, Xildhibaano, maamulka gobolka Nugaalk,kan degmada Garoowe, saraakiisha kala duwan ee ciidanka iyo kumannaan dadweyne ah oo ku labbisan Calanka Puntland iyo kan Soomaaliya, kuwaas oo ay ka muuqanaysey farxad aad u sarraysa.
Madaxweynaha ayaa markii ay ciyaartoydu soo gaareen Garoonka Konoko waxa uu mid mid u gacan qaaday dhammaan ciyaaruahannada oo ay wejiyadooda ka muuqatey sida ay ula dhacsan yihiin guusha ay soo hooyeen
Dr. C/weli Gaas ayaa ku boggaadiyey ciyaar yahannadan guusha ay u soo hooyeen Puntland, waxaana uu kula dardaarmay in ay halkaasi ka sii wadaan dedaalka ay ugu jiraan in ay noqdaan horyaalka kubbadda cagta ee Soomaaliya, isagoo Madaxweynuhu sheegay in la guddoon siin doono abaal marinno u dhiganta guusha ay usoo hooyeen Puntland.
Ciyaartoydaan guusha taariikhiga ah ka soo hooyey tartan ciyaareedkii maamullada dalka ayaa markii ay gaareen magaalada Garoowe waxa ay la kulmeen kumannaan dadweyne ah oo ku sugayey Barxadda Garoowe, kuwaasoo ay muuqatay xamaasad iyo farxad dheeraad ah.
Daawo Sawirrada: Sida ciidamadu uga hortageen maleeshiyaadki weeraray xarunta CID
Maxkamadda gobolka Banaadir oo xukun ku diray dad lagu soo qabtay maandooriye “SAWIRRO”
Maxkamadda gobolka Banaadir oo xukun ku diray dad lagu soo qabtay maandooriye "SAWIRRO"